Icheta ntiwapụ nke ọrịa na ọrịa neurodegenerative: aphasia na-aga n’ihu n’ihu. Alzheimer's - Ọzụzụ Ọmụmụ
Icheta ntiwapụ nke ọrịa na ọrịa neurodegenerative: aphasia na-aga n’ihu n’ihu. Alzheimer
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Icheta ntiwapụ nke ọrịa na ọrịa neurodegenerative: aphasia na-aga n’ihu n’ihu. Alzheimer
Asụsụ, ọrụ dị mkpa ịmara na-etolite na nwata, na-aghọ akụkụ dị mfe n'ọtụtụ nsogbu akwara ozi. Mgbe etinyere nhazi asụsụ, nchọpụta nke aphasia. Ọ dị mkpa ịchọpụta ihe mere ya ugboro ugboro, ọkachasị ndị ọrịa nwere ọria ụbụrụ ma ọ bụ ụdị mbibi ụbụrụ ndị ọzọ..
N'iburu n’uche ya na itinye aka na ọtụtụ mpaghara ụbụrụ, asụsụ nwere ike imetụta ọtụtụ ọrịa neurodegenerative; otu ihe doro anya na nke a bụ mgbaka, nke ahụ bụ, mfu nke ọgụgụ isi dị elu. Otu ụdị wapụrụ iche na-emetụta asụsụ: ọ bụ yansogbu aphasia mbu (PPA) ọ na - aputa ihe mgbe mpaghara ụbụrụ na - etinye aka na asụsụ bidoro imebi.
N'aka nke ya, enwere ike ike PPA n'ọtụtụ ọdịiche, dabere na nsogbu asụsụ nke onye ọrịa na-ewetara. Ndị ọrịa nwere mgbanwe nke PPA (svPPA)dịka ọmụmaatụ, ha na-enwe ihe isi ike na-aga n'ihu na -agagide aha, ebe ma ọ bụ mmadụ. Ka oge na-aga, ọ nwere ike isiri ha ike ịghọta nke ọma ụfọdụ okwu ma nwee ike inwe nsogbu ijigide mkparịta ụka n'ihi mmụba okwu ha na-aga n’ihu..
Oftọ ụkọ ihe a kọwara etu a na-echeta ọrịa ọrịa neurodegenerative ọzọ bụ nke eji nwayọ gbanwee okwu: ọrịa nke Alzheimer. Na mmalite nke ọrịa, ndị ọrịa nwere ọrịa Alzheimer nwere ike inwe ihe isi ike n ’iweghachite okwu, wee si n’ihu na-enwe ihu ọma. Ka nsogbu a na-aga n’ihu, ha na-amalite ịsụ, stam ma ọ bụ jiri okwu edetu akpa, ruo mgbe ha ga-efufu ikike iji mepụta ahịrịokwu ndị ziri ezi..
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Phonetik na phonology: site na tiori rue ịzigharị na ụmụaka na ndị okenye (akụkụ 3: ọgwụgwọ ụmụaka)
Ajụjụ dị mkpa ị kwesịrị ịjụ bụ: Arezọ ndị a na - eme ka asụsụ si na - enwe nsogbu abụọ a kọwara otu?
Nke a bụ ajụjụ De Vaughn na ndị ọrụ ibe ya nwara ịza ya na nyocha nke edepụtara na Journal of Neuropsychology.
Ebumnuche ndị dere ya bụ ịtụle ma tunyekwaa okwu episodic verbal (iji okwu ndepụta mmụta mmụta ule) na ndị ọrịa 68 nwere svPPA na 415 na ọrịa Alzheimer.
Ndị bịaranụ nwetara ule dị iche iche nke neuropsychological gbasara nlebara anya, asụsụ, ebe nchekwa na ọrụ ndị isi. Ule ndị a dị mkpa:
Ule nke ebe nchekwa episodic (ozugbo iweghachi na ndepụta nke mkpụrụ okwu 9, yana meso ya mata okwu ndị ọzọ na-anụbeghị mbụ ya; nnomi ebe eserese)
Ule nke ihe omumu ihe omuma (mkpakọrịta n'etiti okwu na eserese).
Nsonaazụ gosiri na ndị ọrịa nwere svPPA meriri nke ọma na ule mmụta nke ọnụ karịa ndị nwere ọrịa Alzheimer. Na mgbakwunye, ha gosipụtara ikike ikike ncheta nke ọma karịa ka ndị nwere Alzheimer gosipụtara ikike ndị ka mma metụtara ihe ọmụmụ Semantic.
N’aka nke ozo, enweghi ihe di iche na ebe nchekwa ichota (nnabata okwu ndi a nụrụ).
N'ime ndị ọrịa nwere ọrịa Alzheimer, mgbake okwu pụtara ka ọtụtụ parampat na-emetụta ya, gụnyere afọ, okike, arụmọrụ na nyocha dị iche iche nke neuropsychological, na ọbụnadị ncheta ihe ngosi.
N'ime ndị ọrịa nwere svPPA, mgbake okwu pụtara ihe ndị yiri ya na-emetụta ya mana karịa ihe niile site na ịmara mkpụrụ edemede.
Ndị ode akwụkwọ kwubiri na enwere nkwanye arụmọrụ n'etiti svPPA na ọrịa Alzheimer gbasara enweghi ncheta ọnụ: ebe nchekwa nlele ga-ebu amụma mkparị ụbụrụ episodic na-arịa ọrịa Alzheimer, na ndị ọrịa nwere svPPA ọ ga - eyi ka ọ nwere ihe jikọrọ ya na ihe ọmụma. mkpụrụ edemede.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Imeziwanye akuko a na ede akuko banyere umuaka nwere nsogbu ikwu okwu: ihe omumu
Dịka oge niile, na nke a, ọ dị mkpa iburu n'uche mmachi ọmụmụ ihe ahụ, dịka nha nke ndị sonyere na nyocha nke ndị otu abụọ (ọtụtụ ndị nwere Alzheimer), na-eleba anya n'ọmụmụ ihe ọzọ nke na-edozi ụdị abụọ ahụ. ndị ọrịa.
N'agbanyeghi ihe obula, ihe omumu a na - enye echiche na ebe nchekwa na lexicon bu ihe ndi mebiri emebi, ma na - agbanwe ya n'uzo di iche iche na oria neurodegenerative di iche iche, obuna ma n’ile anya ha nwere ike hadi otu. Ozi a bara uru ọ bụghị naanị maka ịghọta nsogbu ndị a kamakwa maka ịhazi usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị dabere na mkpa na ikike nsị nke ndị ọrịa.
MCI, imirikiti ahụrụ ọrụ: gịnị ka ọ bụ?
Frontotemporal dementia - akparamagwa agwa
Ọrịa Alzheimer na nkà ịkwọ ụgbọala
Nyocha nke neuropsychological: ọ ga - ekwe omume?
Dementia na cognitive mkpali: ọzụzụ dị iche iche na ntụnyere
Otu Alzheimer si emetụta okwu gị - Nnukwu okwu
Ndị otu mba Aphasia
Semha Variant Primary Progressive Aphasia - Ebe nchekwa UCSF na ingka Agadi -
DeVaughn, S., Casaletto, KB, Staffaroni, AM, Wolf, AA, Marx, G., & Kramer, JH (2020). Ihe iche dị iche iche ji mkpụrụ okwu arụmọrụ na-eme ihe n'echegharịghị echiche ya na ọrịa Alzheimer. Journal nke Neuropsychology.
nsogbu nke aphasia nke mbu, Alzheimer, Ebe nchekwa na ebe nchekwa, PPA, PPA na Alzheimer, PPA na ebe nchekwa, SIPPPA, ọdịiche mkpụrụ edemede nke isi mmalite aphasia
Icheta ntiwapụ nke ọrịa na ọrịa neurodegenerative: aphasia na-aga n’ihu n’ihu. Alzheimer2020-08-142020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/la-memoria-episodica-verbale-nelle-malattie-neurodegenerative.png200px200px
Nsonaazụ ọnya cortical na afọ mmepe na nka ọgụgụ isi na mmụta ụlọ akwụkwọEdemede, Stroke, Ndi otu
Ọ nwere ike bụrụ na nchekasị nke episodic na ịsụgharị okwu ga-ekwu na ọ ga-akwụsị ojuju?Dementia, ọgụgụ isi, Asụsụ